လက်တွဲလို့ မရမှာ သေချာနေတဲ့ စုံတွဲပုံစံ ၄ ခု | Buzzy
လက်တွဲလို့ မရမှာ သေချာနေတဲ့ စုံတွဲပုံစံ ၄ ခု
သင်တို့စုံတွဲမှာရော ဒီလိုအပြုအမူတွေ ရှိနေပြီလား ?
1. ပြသာနာတွေနဲ့ စုံတွဲ
အမြဲတမ်းလိုလို ပြဿနာတက်နေတဲ့ စုံတွဲတွေ ရှိပါတယ် ၊ အမြဲတမ်းလိုလို အသေးအဖွဲ့လေးကအစ အမြင်ချင်းမတူ ၊ အယူအဆချင်း ညှိလို့မရတဲ့ စုံတွဲမျိုးပေါ့
2. ကြည့်မရတဲ့ စုံတွဲ
တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက် အမြင်မကြည်ပါဘူး ၊ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု အမြဲလိုလို ပြသာနာတွေ ပေါ်တက်ပြီး ၊ စိတ်ပျက်ဖွယ်ပါ
3. အကဲပိုတဲ့ စုံတွဲ
အမြဲတမ်း ဘာမဟုတ်တာလေးကို အကဲပိုပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ ပြော ၊ လုပ်တက်ကြတဲ့ စုံတွဲမျိုးတွေပေါ့ ၊ သူတို့ဟာ အခြားသူတွေ အမြင်မှာလည်း မျက်စိနောက်လောက်အောက် အချစ်သည်းပြကြပါလိမ့်မယ် ၊ အဲ့လိုနဲ့ ကြာလာတဲ့အခါမှာ ငြီးငွေ့မွန်းကျပ် စိတ်ပျက်ပြီး ကွဲကြရမှာ အသေအချာပါပဲ။
4. မျှော်လင့်လွန်းတဲ့ စုံတွဲတွေ
အခြားစုံတွဲတွေက ဘယ်လိုမို့လို သူ့ကိုလည်း အဲ့လို လုပ်ပေးစေချင်တယ် ၊ ဟိုဟာလေး လုပ်ပေး ၊ ဒီဟာလေး လုပ်ပေးတာမျိုးကို လိုလားတောင့်တတယ်ဆိုတဲ့ စုံတွဲမျိုးတွေဟာလည်း ကြာလာတဲ့အခါမှာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် စိတ်ပျက်သွားကြမှာပါ။